Usuku My Pet » Romance, A Feeling Noma Something We Do?
Uma bheka izwi 'romance' in the dictionary ibizwa ohlwini kokubili ibizo kanye nesenzo! Ngakho siyini ngempela romance?
Ngikhumbula emuva esikhathini lapho Ngangivame umzukuzuku ngempela ebuhlotsheni romantic, Mina ex esithile futhi sasizama 'ukusindisa' ubuhlobo bethu befa, ngakho sanquma ukuthi ngeke sibe 'usuku ebusuku' isonto ngalinye. Akukho lutho olungalungile kulokho mbono, eqinisweni abanesimo masonto onke 'usuku ebusuku' kuyinto I ugqugquzele amaklayenti ami ukwenza, Nokho lokho Ngiyakhumbula ngalokhu ubuhlobo oluthile ukuthi kwakungasho lutho bangaki dates sahamba, the romance akaphindanga wabuya! Imizwa yethu sasishintshe. Futhi ngakho wenza nakancane umehluko yini kangaka njalo kangaki sahlala ngaphesheya kwetafula kusuka nomunye a setting romantic, kade kukhona Namanje no romance for us kulesi simo esithile.
Ngakho, lokhu kubonisa ukuthi awukwazi ukuphoqa romance.
Kubonisa ukuthi ungenza izinto ndawonye, okuyinto abantu abaningi abayibiza ngokuthi 'yothando', Nokho uma imizwa ngemuva izenzo ungekho khona-ke ngempela engazizwa romantic kakhulu ngaso sonke, eqinisweni ungezwa sengathi edonsa amazinyo. Wake wahlala nomuntu nithandana phezu isidlo out futhi kwakungafaneleki sazizwa? Ingxoxo kwakwenzeka futhi kwambangela, noma mhlawumbe kwakukhona ukungezwani futhi umuzwa omubi emoyeni. Uma lokhu kunjalo akanandaba kanjani romantic setting noma umsebenzi eniwenzayo, it nje akusho alingane kuze 'romance'. On the Flipside Angikwazi ngicabange ngezikhathi lapho ngenzile izinto umuntu nje kwakungewona romantic ngaso sonke, like nokuhamba odakeni in wellies zethu in the rain, kodwa namanje wazizwa romantic, ngoba imizwa uxhumano I wabelana ngayo lowo muntu.
Kanjani ngalabo imibhangqwana ubona ndawonye ukuthi kuye kwadingeka ngokucacile impikiswano - indlela yothando ngeke kusihlwa yabo ibe? Mhlamunye basindiswe, uma omunye wabo wenza into romantic ukuthi waphula eqhweni futhi kwabangela nemizwa yothando. Empeleni musa bathi sex ukwakheka kungaba hot? (Ukuze abesifazane zami amaklayenti I batusa uya ubudlelwano lapho ukuthanda kanye nogqozi ongaguquki, kunokuba ashisayo nabandayo).
Njengoba owesifazane angikwazi efakazela iqiniso ukuthi uma umuntu iya elide of into yothando owesifazane wakhe kuyaziswa kakhulu, ngisho noma mhlawumbe owesifazane wathi kuphela nithandana umuntu wathi, futhi yayingaqiniseki ukuthi ngaye kodwa, ukukhuluma ngobubanzi thina besifazane bayakwazisa ukushukuma romantic. Kodwa ngisho kule an simo phezulu, engadingeki gesture romantic ingaba ungakhululekile, kanjalo iphi line?
Kusho romance kuwe? Ingabe kufanelekile kuzo zonke izimo futhi uma kungenjalo kungani kungenjalo? Ingasetshenziswa ukuphulukisa futhi yokulungisa ubuhlobo noma kuvuswe uthando and passion? Lena imibuzo ethakazelisayo ukubuza.
Nakanjani ingxabano ezinhlangothini ezimbili. Ngokwami ​​I asikisela ukuthi romance umuzwa, okungase sabangelwa isenzo noma uchungechunge izenzo. Ngokwesibonelo, uma umyeni wami uhlela usuku nice for us, futhi uya umzamo ukuthatha me out, noma uveza ekhaya kweqembu elikhulu of izimbali kimi, lokhu eyoqala impendulo romantic ngaphakathi kimi. I uyozizwa ngendlela ethile futhi mina ngeke ahlanganyele ukuthi naye. I uyosazisa akwenzile uzokwenza ngizizwe ngijabule futhi smile. Lokhu, esikhundleni salokho, ngeke azizwe okuhle.
Kodwa lokho ngempela ezithakazelisayo kimi ukuthi thina besifazane nomthamo ngokudala imizwa yothando ngokwethu konke sodwa! Lokho I mean by lokhu ukuthi uma owesifazane ifunda nje 'babe' in soft wakhe, energy feminine, angakwazi azizwe romantic, ngisho uma kungekho muntu samanje. Lo muzwa bungatholakala kusetshenziswa okugeza hot, amakhandlela, nge massage aromatherapy, ukugqoka izingubo amahle nangezinye izindlela eziningi. Ngakho lokhu ukwenza amadoda engadingekile? Ungenzi, ngempela Kunalokho, I asikisela ukuthi lapho owesifazane kungathambisa kanye nesipiliyoni umuzwa romantic, lokhu kuvula isikhala sakhe ukuba sazise umuntu wakhe lapho enza into owenezela kulokhu umuzwa.
Uma wazi indlela yami ukuze dating niyokwazi ukuthi ngikholelwa ngobudoda okweqisayo futhi njengabesifazane energy izindima ngaphakathi ubuhlobo, kanjalo for a woman njengabesifazane bengingeke basikisela 'ukwenza' izinto romantic for umuntu wakhe, Nokho eba isikhala romantic of 'umuzwa' futhi 'nokuba', bese ukwabelana ukuthi nomuntu wakhe kungaba mnandi. Iphinde okuthanda isidingo sakhe ukuba ngobudoda okweqisayo futhi sijabulise owesifazane wakhe ngokwenza izinto zakhe ukuthi ngimjabulise. Uma ungowesifazane futhi ungathanda romance more ebuhlotsheni bakho I batusa ukuzama lokhu. Futhi uma umuntu futhi ufuna ukuba 'ukunqoba' owesifazane othandana naye, noma ulethe passion emuva ubuhlobo wena njengamanje, I ibonisa 'ukwenza' into romantic for wakhe, ngomoya yeqiniso romance ngemuva izenzo!